Jimmy Iovine haasisina kukosha kuApple | Ndinobva mac
Jimmy Iovine haasisina kukosha kuna Apple
Pakutanga kwegore, runyerekupe rwakasvetuka rwakaratidza kuenda kwaJimmy Iovine kubva kuApple inotevera Nyamavhuvhu, kubvira Aive makore mana kubva Apple yatenga Beats Electronics, uye aigona kutotengesa masheya aakange agamuchira sechikamu chekubhadhara, pamwe chete nemurapi Dr, Dre, Ian Rogers naTrent Reznor, vamwe varidzi veBeats Music payakatengwa neApple.
Iovine akamanikidzwa kuramba ruzivo irworwo, achiti rwaive rwenhema zvachose uye izvo Ini ndaive nehurongwa hwekugara nekambani. Chaasina kutaura ndechekuti basa rake semunhu mukuru anotungamira, pamwe naEddy Cue, weApple Music raizotora chigaro chekumashure.
Sekureva kweThe Wall Street Journal, Iovine ichave chipangamazano kubva mumwedzi waNyamavhuvhu, achirega kuve mumwe wevatungamiriri vepamusoro weApple yekushambadzira mimhanzi sevhisi, saka haazove nemabasa ezuva nezuva, asi basa rake rinozove risinganyanyo kukosha kupfuura zvazvazvino.
Zvinoenderana nepepanhau iri, Iovine, anoda kushandisa nguva yakawanda nemhuri yake Uye afunga kuti inguva yekutanga kumisa kushanda zvakanyanya uye kutarisa kunakidzwa nemhuri yake, pamusoro pemari yese yaakakwanisa kuwana mushure mekutengeswa kweBeats Electronics uyezve achishandira Apple semusoro weApple Music .
Iko, kuda, kuenda kweIovine kubva kuApple, ndiyo yekupedzisira tayi iyo kusvika parizvino yakabatanidza Apple neBeats Electronics, kubvira vese Dr. Dree, Ian Rogers naTrent Reznor, vakanga vasiya kambani kare kare, kunyangwe ivo vachiramba vachibatana pano neapo kuburikidza neBeats 1, chikuru Apple Music chiteshi.
Kubva kuvhurwa zviri pamutemo muna Chikumi 0, iyo Cupertino-yakavakirwa kambani yakwanisa kukwezva kutarisisa kweanopfuura 38 mamiriyoni evashandisi, sekureva kwenhamba dzichangoburwa dzakaziviswa zviri pamutemo mazuva mashoma apfuura naEddy Cue.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Jimmy Iovine haasisina kukosha kuna Apple
Neoprene dziviriro yekutakura iyo HomePod